Tesla dia mikasa ny hanasa ny rojom-pivarotana fiara any Taiwan hanangana orinasa any Etazonia - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Tesla dia mikasa ny hanasa ny rojom-pivarotana fiara any Taiwan hanangana orinasa any Etazonia
Tesla dia mikasa ny hanasa ny rojom-pivarotana fiara any Taiwan hanangana orinasa any Etazonia
Araka ny fampitam-baovao Taiwanese Business Times, Tesla dia mikasa ny hanasa ny rojom-pivarotana fiara-motera Taiwaney hampiasa vola sy hanangana orinasa any Etazonia.
Fantatra fa manitatra tsikelikely ny orinasa i Tesla ary antenaina hanangana orinasa vaovao any Texas amin'ny ho avy. Voamarina fa manantena ny hanasa ny rojom-pamokarana Taiwanese hanangana orinasa i Etazonia ny orinasa. Pegatron, AUO, Quanta, ary Chenhong dia heverina fa mety hampiasa vola any Etazonia, izay i Pegatron no mavitrika kokoa.
Ny olona mahalala an'io raharaha io dia nilaza fa ny mpitantana ny Tesla dia nankany Taiwan, Sina mba hifandray akaiky amin'ny rojom-pitaterana fiara any an-toerana, ary manantena fa hampiasa vola any Etazonia ny orinasa Taiwaney.
Ny tompon'andraikitra ao amin'ny departemantan'ny famatsiam-bola any Taiwan dia nilaza fa ny faritry ny famatsiana fiara mandeha any Etazonia dia misy ifandraisany amin'ny fangatahana eo an-toerana. Ny orinasa Taiwanese dia afaka mamokatra any Etazonia ary mamatsy mpanjifa eo akaiky eo, ary misy talenta maro ao an-toerana any Etazonia izay afaka mahafeno tsara kokoa ny filan'ny mpanjifa amin'ny voalohany. Ny hetsika lehibe dia nanasa ny rojom-pamokarana Taiwanese ho any Etazonia.
Araka ny tatitra, satria ny orinasan-tsolika famatsiana fiara dia tsy hanao orinasa Tesla fotsiny, miampy ny baiko avy amin'ny mpamokatra fiara hafa, matoky ireo vinavina ireo. Araka ny antontan'isa avy amin'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny any Taiwan, teo ambany baikon'ny Tesla sy ireo mpamily hafa, ireo orinasa mpamatsy fiara dia namatsy vola mihoatra ny $ 100 miliara tany Taiwan, izay nanambola Pegatron mihoatra ny $ 14,9 miliara amin'ny solosaina fanaraha-maso lehibe, hisy ihany koa ny vondrona tontonana touch panel aorian'izany ny renivola Venture dia $ 70.2 miliara. Ho fanampin'izay, ireo orinasa fonosana sensor ho an'ny sary toa an'i Xindian sy Weixi dia nandany vola mihoatra ny $ 10 miliara NT.
Tsara ny manamarika fa ny TSMC dia nanambara tamin'ny taon-dasa fa hampiasa vola 12 miliara dolara amerikana hananganana orinasa mpanamboatra chip 5-nanometer any Arizona izy, hoy hatrany ny tsena fa heverina fa hanaraka ny dian-tongony hamatsy vola any Etazonia ny tsenan'ny famatsiana. . Androany, Tesla dia te-hanangana rojom-pamatsy fiara feno any Etazonia, ary ny tombony amin'ny famokarana amerikana dia mety hohatsara kokoa.